Nasiib darro nolol maalmeedka | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Nasiib darro nolol maalmeedka
2. U dhaqaaq qaylada
5. Duufaan qaawan
Nasiibdarro - qaar ka mid ah waxay caadi yihiin, halka kuwo kale ay ka xishoodaan oo ay iska ilaaliyaan. Ma aha in qof kastaa isku dayo in uu tago xerada fasax dabiici ah, ku raaxeyso sauna ama xeebta nudist. Laakiin waa maxay sababta?
Mawduuc mowduuc mawduuc ah nolol maalmeedka
Inkasta oo aanu ku dhalan qaawan, dad yar ayaa sida badan saameyn ku yeeshay waalidiintooda iyo suurtagal ahaan diintooda, ma ahan inay sameeyaan wax qaawan.
Nasiib darro nolol maalmeedka - adigaa iska leh gurigaaga?
Qaarkood waxay ka xishoodaan sababtoo ah waxay u maleynayaan inaysan lahayn shakhsiyad habboon. Nuduudnimadu waxay noqon kartaa dareen wanaagsan oo la helo.
Halkan waxaa ku qoran dhawr talooyin oo kaa caawin kara inaad qaadato nudaha is-tijaabinta ama mawduucaaga asturan yahay.
1. Hurdada qaawan
Waxaad bilaabi kartaa hurdo qaawan. Dareemida jidhka keligaa waa sida ugu macquulsan sida labada qof. Saameyn wanaagsan oo wanaagsan, gaar ahaan xagaaga, waa inaadan xirtin dhar kasta oo qoyan.
Qofkasta oo guriga jooga oo aan u baahnayn inuu shaqo tago, dukaamo ama ballamo ayaa ku socon kara agagaarka qaawan ee guriga dhexdiisa ah, oo tusaale ahaan. Ama waxaad ku shubtay saqaf yar yar on fadhiga, fadhiiso oo naso buug. Waxa kale oo suurtogal ah in aad is-eegto naftaada hortiisa muraayada ama qoob-ka-ciyaarka hortiisa.
3. Cun qaawan
Haddii aad hore u fadhiisatey, waxaa kale oo suurtagal ah in cuntadaada la qaato dhar la'aan. Intaas waxaa sii dheer, cuntada waxaa lagu dhajin karaa miiska hortiisa ka hor. Haddii aad tahay lamaane, waxaad fursad u leedahay inaad ku darto nolosha jacaylka leh kareemka shukulaatada, strawberries iyo kareem, tusaale ahaan.
4. Sunbathe qaawan
Waa wax cajiib ah haddii aad qorraxda ku dhejisid dharka aan dharka lahayn ama dharka kale. xuduud lahayn tan The iyadoon dhibaato loo sii baraha dhaldhalaalaya oo jidhka ah, tusaale ahaan waxay noqon kartaa in aad beerta u gaar ah, haddii deriska ah ma arki karo ama si ay uga badbaadaan la derbiga dhar dhiganta sare ama dalladaha ka view. Ma aha hadiyad beerta gaarka loo leeyahay ama aad doonayso in la raaco waxaa baddii ku ah, waa mid ka mid doondoonaan ka hor xeebta a online, halkaas oo marna laga soo qaawan waa suurto gal. Oo isku daya ma cadceedsato qaawan by Xaakimkii, runtii isku dayi kartaa oo kaliya hal mar inuu la jiifsado Toob Ah ee qorraxda. Kadibna mid ka mid ah dhawrka xiga ee soo socda ayaa weli suurtagal ah in gebi ahaanba meesha laga saaro dharka.
Ka dib qorraxda, dabaasha iyada oo aan dabbaalanayn. Halkan waxaad dareemi kartaa naftaada iyo qoyaanka qoyan.
Haddii aad haddaba ayaa u soo baxdo baxay balliga ama u gudubno, waxaad noqon doontaa faraxsanahay in la ogaado in aan dharka qoyan ku eekaan maqaarka in loo baahan yahay in mar ama waxa aad hadda la beddelo qalalaan, maxaa yeelay, si fudud u door bidaan Jeexitaanka ama maydhashada joog qalalan waxaa lagu xirto. Hadda waxaa suurtagal ah in kaliya qalajiso ama qoyaan qoyaanka qoyaanka ilaa ay ka qallajiso.
6. Qaawan yihiin roobka
Taas waxaad u baahan tahay meel aan cidna ku arag, sida beertaada, beerta ama badda. Haddii aadan qabin qabow oo markaas kadib roobab kuleyl ah, waxaa suurtagal ah inaad dareento jirkaaga iyo duufaanta.
7. Qaado sawirro fara badan
Ku dhowaad telefoon kasta oo moobil ah horeyba u haysta kamarad maalmahan. Ama mid ayaa isla markiiba qaadata kamarad tayo sare leh. Waxaa jira fursado ku filan ujeeddooyinka. Tusaale ahaan, waxaad ku seexan kartaa sariirta ama sariirta. Sidoo kale waa suurto gal ah in meel camera ku Maala ah, iyagoo qaawan oo wax loo kariyo, tusaale ahaan, ama inuu u ciyaaro biyaano iyo saxaafadda sawirada la isticmaalayo isku-saacad. Qof kasta oo la Wadaage oo aad rabto inaad iyaga la yaab, tusaale ahaan, jadwalka ku jira in yeerqa qaawan adiga kuu gaar ah sidoo kale la xiriiri kartaa studio a photo xirfad la mid ah. Ama waxaad wada joogtaan ama horay u wadaagtaan lamaanahaaga.
Laakiin iska ilaali sawirrada qaawan - sexting. Xaalad khatar ah!
Sidaa daraadeed ma ahan mid adag in la sameeyo waxyaabo kala duwan oo qaawan. Waa inaad qaadataa talaabada ugu horeysa, taas oo ah, isku day. Marka aad ka soo horjeedo joojinta, waxaad dareemi kartaa jirkeedu cajiibka ah oo xorna aan lahayn dhar la'aan.
Dhab ahaan, xitaa haweenka haysta gabar saaxiib ah iyo ragga oo leh asxaab waxay sameyn karaan tijaabadan iskudhafka ah, haddii aadan kaligaa ku kalsoonayn. Muddo ka dib, si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa ogaanaya in qaawanaanta ay xitaa qurux badan oo isdabajoogto marar badan iyo marar badan oo aan qarsoodi ahayn.
Farsamooyinka nasashada ee nolol maalmeedka
Barashada noolaha iyo noolaha ee nolol maalmeedka
Noqo waalid - sii joog lamaane | iskaashi